बाहिर निस्किनु भन्दा पहिले हिजो गृह-मन्त्रालयले जारि गरेको सूचना हेर्नुहोस, नत्र दु:ख मात्र होइन कडा कारवाहीमा पर्नुहोला ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/बाहिर निस्किनु भन्दा पहिले हिजो गृह-मन्त्रालयले जारि गरेको सूचना हेर्नुहोस, नत्र दु:ख मात्र होइन कडा कारवाहीमा पर्नुहोला !
कोभिड–१९ को सङ्क्र`मण रोक्न गृह मन्न्त्रालयले आवश्यक सुरक्षा साव`धानीमा थप सतर्कता अपनाउने भएको छ । यसअघि पास प्राप्त भएपछि निर्बाध रुपमा एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जान पाउने व्यवस्थालाई रोक्दै आवतजावतमा कडाइ गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा मानिसहरुको अनावश्यक प्रवेश भएको र उपत्यकामा समेत भीडभाड बढेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त नियम आगामी बिहीबारबाट लागू हुनेछ ।
काठमाडौँ उपत्य`काको तीन जि`ल्लाका लागि भने उक्त नियम लागू हुनेछैन । य`द्यपि कुनै जि`ल्लामा जानै पर्ने अवस्था आएमा जुन जिल्लामा जानुपर्ने हो त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका आउनु परेमा गृह मन्त्रा`लयको स्वीकृति आव`श्यक पर्नेछ । यस्तै सरकारले सञ्चा`लनको अनुमति दिएका सवारीको हकमा अहिले परिच`यपत्र देखाएर जाने गरिएकामा अब भने निया`मक निकाय`बाट जारी हुने पास अनिवार्य गर्न लागिएको छ । पासको दुरुपयोग भएको र पास नभए`काहरु समेत जथा`भावी निस्कने गरेकाले उक्त व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो ।
गृह प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आज सुर`क्षा अवस्थाको समीक्षा भयो, अनावश्यक मानिसको चहलप`हल केही बढी देखियो, सेवा बढ्दा चहलपहल बढ्नु स्वाभावि`कै हो तर चाहिने भन्दा बढी पास लिने, फो`र्स लगाउने काम भयो, त्यसला`ई नियन्त्र`ण गर्न त्यस्तो व्य`वस्था गर्ने नि`र्णय गरिएको छ, यो नियम बिहीबारबाट लागू हुन्छ ।”
मुलुकमा पछिल्लो समयमा बढी मात्रामा सङ्क्र`मित व्यक्ति पहि`चान हुन थालेपछि मानिसको आवत`जावतमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण उक्त निर्णय गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । हिजो एकै दिन ८३ जनामा कोभिड–१९ को सङ्क्र`मण भेटिए पछि गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै आवतजावतमा थप कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अन्तर जिल्लाका लागि अहिलेसम्म बाँडिएका त्यस्ता पास रद्द गर्ने निर्णय पनि भएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले आज पास सम्ब`न्धमा जारी गरेको परिपत्र अनुसार एक जिल्ला`बाट अर्काे जिल्ला`मा जाने गरी यस अघि जारी गरि`एको पास सबै र`द्द गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउनु`परेमा गृह मन्त्रालयको स्वी`कृति लिनुपर्ने, अत्यावश्यक कामका लागि एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जानु पर्ने भएमा पास जारी गर्ने जिल्लाले जानुपर्ने जिल्ला`को प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
यस्तै पास स्वीकृ`तिका लागि अनुरोध गर्दा प्रयोजन र पुष्ट्या`इँ समेत खुलाउ`नुपर्ने, उपत्यका प्रवेशका लागि पास जारी गर्दा पासमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति नम्बर समावेश गर्नुपर्ने तथा जारी भएको पास बिना एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला जान लागेको अवस्था फेला परेमा शुरु जिल्लाले अर्काे जिल्ला पुग्नु अगावै सवारी आवाग`मन रोक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ । पछिल्लो समयमा मुलुक`भर लकडाउन जारी भए पनि मानिसको आवागमन निक्कै बा`क्लिएको छ । तर विभिन्न जि`ल्लाले भने यसअघि नै अन्तर जिल्लाको पास जारी नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अन्ततः भदौ ८ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय, यस्तो आयो सूचना !